>The Reality of Myanmar National League is To Make People Weak? – Article2| MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
>The Reality of Myanmar National League is To Make People Weak? – Article 2	January 29, 2011
Filed under: MY NEWS,MY WRITINGS,PHOTOS,SPORT — Nyo Gyi @ 12:15 pm
ပြည်သူတွေကို သွေးခွဲနေပြီလော၊ အာရုံပြောင်းနေပြီလော၊ လှည့်ဖြားရိုက်စားနေပြီလော (၂)
1, October, 2009 တုန်းက ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာပဲ "MNL ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများဖြင့် ပြည်သူတွေကို သွေးခွဲနေပြီလော၊ အာရုံပြောင်းနေပြီလော၊ လှည့်ဖြားရိုက်စားနေပြီလော" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီဆောင်းပါးရေးဖြစ်ခဲ့ရတာက (၂၃၊ ၉၊ ၀၀၉)မန္တလေး၊ ဗထူးကွင်းမှာ ရတနာပုံဘောကလပ်နဲ့ ဒယ်လ်တာ(ယခုဧရာဝတီယူနိုက်တက်)ဘောကလပ် တို့ပွဲအပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကွင်းတွင်း၊ ကွင်းပြင်ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများကို ကြားသိရပြီး အာဏာရှင်များက ၄င်းတို့ရဲ့ ရက်စက်လှည့်ဖျားမှုများကို သတိမထားမိစေရန် ပြည်သူများအား ဘောလုံးနှင့်အာရုံပြောင်းသွေးခွဲနေပုံကို ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အသိပေး၊ မီးမောင်းထိုးပြလိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလည်း အထက်ပါ ဆောင်းပါးလိုပဲ Myanmar National League (MNL) နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆင်ခြင်သတိထားစရာများကို ဆက်ရေးရဦးမယ့် လက္ခဏာတွေ တွေ့နေရပြန်ပါပြီ။
MNL ကြောင့်တိုင်းပြည်ဘောလုံးအဆင့်အတန်း အဘယ်မျှ တိုးတက်ခဲ့ပါသနည်း?
MNL ကြောင့် မြန်မာ့ဘောလုံး တိုးတက်သလား။ ဆုတ်ယုတ်သလားကတော့ အမြင်သာကြီးပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲ (AFF Suzuki Cup 2010)မှာ မြန်မာအသင်းဘယ်အခြေဆိုက်ခဲ့သလဲ? အုပ်စု (၃) ပွဲကန်ရတာမှာ ဗီယက်နမ်ကို (၇-၁)နဲ့ ရှုံး၊ စင်ကာပူကို (၂-၁)နဲ့ ရှုံးပြီး ဖိလစ်ပိုင်ကို (၀-၀)နဲ့ သရေကျကာ ရမှတ် (၁)မှတ်၊ ရဂိုး (၂)ဂိုး၊ ပေးဂိုး (၉)နဲ့ အုပ်စုအောက်ဆုံးအဖြစ် ပြိုင်ပွဲကနေ အရှက်မရှိ ထွက်ခွာခဲ့ရတာပါပဲ။ ဘဲဥကွဲပြီး (၁)မှတ်နဲ့ ပြည်တော်ပြန်လာရတာကို အတော်တိုးတက်လာတာပါလားလို့ အောက်မေ့ရတော့မလိုပါပဲ။
ကလပ်အသင်းပိုင်ရှင်တွေက ဘောလုံးကလပ်တွေလည်ပတ်ဖို့ ငွေတွေ ဖောဖောသီသီ အဆက်မပြတ် သုံးနေနိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
ဆီးမီးပရိုခေါ်ခေါ်၊ ပရိုခေါ်ခေါ် ဘောလုံးကလပ်တစ်သင်းထူထောင်ရတာ ငွေကြေးများစွာ (ကျပ်ငွေပေါင်း သိန်းထောင်ချီ၊ သိန်းသောင်းချီ)သုံးရပါတယ်။ ဒီငွေတွေ ဘယ်က ၀င်နေသလဲ။ အခြားလုပ်ငန်းတွေရှိလို့ပေါ့လို့ လွယ်လွယ်မတွေးစေချင်ပါ။ ဘာလုပ်ငန်းတွေလဲ။ ၀င်ငွေ-ထွက်ငွေစာရင်း ဘယ်လိုရှိသလဲ။ ငွေဖြူလား၊ ငွေမည်းလား။ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျမသိကြပါ။ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခွန်အပြည့်ဆောင်သလား၊ မဆောင်ဘူးလားလည်း ဘယ်သူမှ တိတိကျကျမသိပါ။ ဘယ်သူ့ငွေတွေ၊ ဘယ်ကငွေတွေရပြီး ဘယ်လို ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားပြီး ဘယ်လောက်မြတ်၊ ဘယ်လောက်ရှုံးမှန်းလည်း ဘယ်သူမှ မသိပါ။ ငွေတွေကတော့ MNL ကလပ်အသင်းတွေအတွက် အသင်းပိုင်ရှင်တွေ ရှယ်သုံးနေကြတာပဲ မြင်နေရပါတယ်။ ဘောလုံးကလပ်အသင်းတွေအပေါ် ငွေရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီး အကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ ဘာပြန်ရကြလို့ ခုလို ငွေတွေ သုံးနေကြတာလဲ။ သူတို့ လုပ်ငန်းတွေ ကြော်ငြာလို့ရတာပေါ့လို့ အလွယ်မပြောစေချင်ပါ။ ကြော်ငြာခထက်ကို အခု ဘောကလပ်တွေအပေါ် ငွေသုံးတာက များစွာ ပိုနေပါပြီ။ MNL ဆုဖလားကြီးရတော့လည်း သိန်း ၅၀၀ လောက်သာရပြီး ကွင်းဝင်ကြေးအနေနဲ့ကလည်း ဟုတ်တိပတ်တိရှိပုံမရပါ။ လက်မှတ်အလကားဝေပေးရတာနဲ့။ ပရိသတ်ကို ရထားခ၊ ကားခ အကုန်ခံပြီး အခြားမြို့တွေမှာ အားပေးဖို့ ခေါ်ရတာနဲ့။ ကွင်းထဲကြည့်လိုက်တော့လည်း မြို့စွဲကြီးတဲ့ အချို့မြို့တွေမှာသာ လူအ၀င်များပြီး ခြေစွမ်းညံ့တဲ့အသင်းနဲ့ ကန်တဲ့ပွဲတွေဆို အဲဒီ မြို့စွဲကြီးတဲ့ မြို့တွေမှာတောင် ဘောလုံးပွဲကို ကွင်းထဲဝင်ကြည့်လောက်အောင် စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ သိပ်မရှိလှပါ။
သေချာတာကတော့ ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဇော်ဇော်၊ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ပိုက်ရှင် တေဇ အစသဖြင့်သော စီးပွားရေးကျားကြီးတွေက အာဏာရှင်များရဲ့ ရှယ်ယာထည့်ဝင်မှုများနဲ့အတူ မြန်မာ့စီးပွားရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး သူတို့ရဲ့ တရားမ၀င် ငွေမည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဘောလုံးဗန်းပြပြီး ဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဘောလုံးသမားချင်းလည်း အချင်းချင်းမညှာကြတော့ပါ။ ငွေအတွက် ခြေရဲဇက်ရဲရှိကုန်ပါပြီ။ ဒါကိုပဲ ပရိုပီသတယ်ပြောကြဦးမလားမသိ။ ကွင်းထဲမှာ ခြေစွမ်းပါမက လက်စွမ်းပြကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲလား လက်ဝှေ့ပွဲလား မှားရမတတ်ပါပဲ။ ဒိုင်လူကြီးတွေကလည်း လုပ်ချင်သလိုလုပ်။ ကစားသမားတွေကလည်း ဆဲလိုဆဲ။ လူချလိုချ။ ပရိသတ်ကလည်း ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း ဖရုဿဝါစာတွေ ပိုပြီး ပြောရဲဆိုရဲရှိလာသည်။ ထုချင်နှက်ချင်လာပြီး စိတ်တွေကလည်း ပိုပိုပြီး ကြမ်းတမ်းလာကြပါပြီ။
မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ "ခင်မောင်ထွန်းနှင့် ရန်ကုန် ပရိသတ်တို့ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုများ ထွက်ပေါ်" သတင်းလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ MNL အကြောင့် ပြည်သူတွေ စည်းလုံးရေးပိုကွဲနေကြောင်း အထင်းသားကြီး ဖော်ပြနေပါပြီ။
http://www.soccermyanmar.com မှာတင်ထားတဲ့ Friday, 28 January 2011 ရက်စွဲနဲ့ သတင်းအပြည့်အစုံကို တစ်ပါတည်း ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
" "ခင်မောင်ထွန်းနှင့် ရန်ကုန် ပရိသတ်တို့ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုများ ထွက်ပေါ်
ပြီးခဲ့သည့် ရတနာပုံ – ရန်ကုန် ပွဲစဉ် မတိုင်မီ ရတနာပုံ အသင်း ခေါင်းဆောင် ခင်မောင်ထွန်းနှင့် ရန်ကုန် ပရိသတ် တစ်ဦးတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြဿနာနှင့် ပတ်သတ်၍ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲ ခဲ့ကြမှု များကို ပြည်တွင်း အားကစား ဂျာနယ် Sport Times က စုစည်း ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပြဿနာမှာ ပွဲမကစားမီ နံနက်ပိုင်း၌ မန္တလေး တောင်ခြေတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ခင်မောင်ထွန်းက ရန်ကုန် ပရိသတ် တစ်ဦးကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရသည့် ရန်ကုန် ပရိသတ် ကိုရဲဝင်းလှိုင် ဆိုသူက ခင်မောင်ထွန်း ဘက်မှ လက်သီးဖြင့် စထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်က ကားအောက်ကနေ လှမ်းနောက် လိုက်တယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းလာတာ သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ ကစားသမား တွေရော နည်းပြ အဖွဲ့က လူတွေပါ ပါတယ်။ ၄၊ ၅ ယောက် လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို လုပ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ ခင်မောင်ထွန်းက စထိုးတာ။ ကျွန်တော် ခေါင်းငုံ့ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ထိုးနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ နည်းပြ တစ်ယောက်က မင်း ငါတို့ကို ဘာလုပ်ချင် လို့လဲ ဆိုပြီး ဆောင့်တွန်း လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် အသံပဲ ကြားနေရတယ်။ ကားပေါ်က လူတွေက သံတုတ်တွေနဲ့ ဆင်းလာပြီး သူ့ကို ဆွဲတင်၊ ဆွဲတင် ဆိုတဲ့ အသံတွေလည်း ကြားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကားပေါ်က လူတွေက ကျွန်တော့်ကို အတင်း ဆွဲတင်သွားလို့ သက်သာ သွားခဲ့တာပါ"ဟု ကိုရဲဝင်းလှိုင်က အဆိုပါ ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ရန်ကုန် အသင်းဘက်မှ ပါလာသော ပရိသတ် အများစုသည် မန္တလေး တောင်ပေါ် တက်သွားသဖြင့် ပြဿနာ ဖြစ်သည့် အချိန် လူသိပ်မရှိ ကြောင်းလည်း ကိုရဲဝင်းလှိုင်က ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကိုရဲဝင်းလှိုင်က ရတနာပုံ ကစားသမား များအား လက်ခလယ် ထောင်ပြခဲ့သည့် သူ၏ အပြုအမူနှင့် ပတ်သတ်၍ "ကျွန်တော်တို့ ကားတွေနဲ့ ဘောလုံး ကွင်းတွေကို သွားတဲ့ နေရာမှာ ပရိသတ် အချင်းချင်း တွေ့တဲ့ နေရာမှာ လက်ခလယ် ထောင်ပြတာတို့၊ လက်မ အောက်ချ ပြတာတို့နဲ့ နောက်ပြောင် နေကြတာ ပါပဲ။ ကျွန်တော် လက်ခလယ် ထောင်ပြ လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာတော့ ဘာမှ မရှိပါဘူး"ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ ခင်မောင်ထွန်း ဘက်ကမူ "ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျွန်တော် ဘာမှ ရှင်းမပြ ချင်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခုဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမှာ ဘယ်သူမှန်တယ်၊ ဘယ်သူမှားတယ် ဆိုတာ အကုန်လုံး သိပါတယ်။ ရန်ကုန် ပရိသတ်တွေ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ကားသမားတွေ ပိုသိပါတယ်။ ရှင်းလည်း မပြချင်တော့ဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ရန်ကုန် ပရိသတ်တွေ ရေးထားတဲ့ စာသားတွေ ကိုလည်း ကျွန်တော် ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဘယ်သူမှားတယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးမယ့် သူတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာ ရှိပါတယ်"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ခင်မောင်ထွန်းက အဆိုပါ ရန်ကုန် ပရိသတ်သည် သူ့အား လက်ခလယ် ထောင်ပြ၍ ရန်စကြောင်း၊ သူ့အား အဆိုပါ ပရိသတ် တုံ့ပြန်ပုံ မကောင်းသဖြင့် ပြဿနာ ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိ ကွင်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် မကောင်းလျှင် စိတ်ကြိုက် ဝေဖန် နိုင်သော်လည်း လူနေမှု ဘ၀ကို မဝေဖန် သင့်ကြောင်း၊ ယခု ကိစ္စတွင် မိမိမှ စတင် ရန်စခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စ အပေါ် မည်သို့ပင် ရေးရေး၊ မည်သို့ ပြောပြော လိုက်ရှင်းမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ပြဿနာ ဖြစ်သည့်သူ နှင့်သာ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံ ရှင်းလင်း လိုကြောင်း ပြောကြားသွား ခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး ခင်မောင်ထွန်းက "ကျွန်တော်ကတော့ မှန်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော် မရှင်းတာပေါ့။ ကျွန်တော် ကတော့ ကိုယ်မှန်တယ် ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မကြောက်ဘူး။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ကြတယ်။ ပရိသတ် အချင်းချင်းလည်း ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တယ်။ ရတနာပုံ အသင်းက ရှိသမျှ ဆုဖလား တွေကို ယူနေတော့ မနာလိုတဲ့ ပရိသတ် တွေလည်း ရှိတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး ပြဿနာ ဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ပရိသတ်ဆိုတာ ပရိသတ် လိုပဲ အားပေး စေချင်တယ်"ဟု ပြောကြားသွား ခဲ့သည်။
ယင်းပြဿနာ တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သတ်၍ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ ဘက်ကမူ ၎င်းတို့နှင့် မဆိုင်ကြောင်း၊ ရဲအရေးပိုင် အမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူများ မည်သို့ အရေးယူမည် ဆိုသည်ကို မေးမြန်း သင့်ကြောင်း ပြောကြားသွား ခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ဂျာနယ်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ " "
သတင်းဖတ်ပြီး ကျောချမ်းမိလာပါတယ်။ သတင်းအောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အချို့ကွန်မန့်တွေကလည်း ကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ်။
"ရန်ကုန်မှာကန်မယ့်ပွဲမင်းနဲ့ ငါတို့ ပြန်တွေ့ ကျတာပေါ့…
ရန်ကုန်မှာ ကန်မယ့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နဲ့ ရတနာပုံယူနိုက်တက်တို့ ပွဲမှာ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ပဲ ကြက်သီးထလာမိတယ်။ MNL ကြောင့် ပြည်သူပြည်သားတွေ၊ ကစားသမားတွေ ဒေါသ၊ မာန၊ မောဟ၊ လောဘတွေ ပိုကြီးလာကြကုန်ပလား။
အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ပြီး အာရုံတွေ လွဲကုန်တော့မလား?
အာဏာရှင်တွေဟာ ပြည်သူတွေကို အာရုံလွဲအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ တော်လှပါပေတယ်။ နိုင်ငံရေးအယူအဆမတူမှု၊ အမှန်တရား ပြောဆိုမှုတွေ ကြောင့် လူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် အကျဉ်းချခံထားရတာကို လူတွေ သတိမမူမိအောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရှိန်သြဇာပိုမိုကြီးမားလာနေမှုကို လျော့ပေါ့သွားအောင် ဘောလုံးပွဲရန်ပွဲတွေနဲ့ အာရုံလွှဲနေတာလား။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ (၃၁)မှာ ကျင်းပမယ့် မတရားလွှတ်တော်ဆိုတာကြီးမှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်မှာကို လူတွေ အာရုံမကျအောင် အခုလို ခင်မောင်ထွန်းရန်ပွဲနဲ့ အာရုံလွှဲနေတာလား။ သေချာသတိထား စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ…အစရှိတဲ့မြို့တွေက ကလပ်ဘောပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း စီးပွားရေးကျားဆိုးကြီးတွေ၊ အာဏာရှင်တွေရဲ့ အာရုံလွှဲမှုကို အထူးသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ရန်တိုက်ပေးတိုင်း ရန်ဖြစ်နေရင် ကိုယ်ညံ့ရာကြပါတယ်။ ဘောလုံးကို မချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ အားကစားကို မြတ်နိုးရမှာပါ။ အားကစားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ "အစွဲတွေနဲ့ ရန်ပွဲတွေ"ကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ လူတိုင်းသတိထားစေချင်ပါတော့တယ်။ ။
တော်လှန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများအားလုံး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ…
(၂၉၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၁၁)
Shweyee Winhlaing on သို့ … ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီ…
aung ko on >PITIFUL YOUTH OF BURMA…
Nyo Gyi on MTV EXIT Live in Myanmar
nazia shah on MTV EXIT Live in Myanmar
nazia shah on အဓိက ကတော့ စနစ်ပဲ
>အာဏာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ
Poet Hla Than (or) Kyi Maung Than's Latest Poem, Speech and Profile
Post အသစ်များကို Original Blog တွင် ဆက်လက်တင်ဆက်နေပါသည်